डडेल्धुरा, भदौ ३ । डडेल्धुरामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । लगातारको वर्षाका कारण मौसम प्रतिकूल भएपछि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुन् ।
फेरि आन्दोलन गर्ने डा. केसीको चेतावनी, महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग
काठमाडौं, भदौ १ । सरकारले आफूसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले यस्तै स्थिति कायम रहे फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
‘स्क्रब टाइफस’ रोगबाट दुई बालबालिकाको मृत्यु
धनकुटा, साउन ३२ । उपियाँ, सुल्सुलेलगायत सुष्म किराको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने स्क्रब टाइफस रोगबाट दुई बालबालिकाको मृत्यु भएपछि पूर्वाञ्चलमा विषेश सतर्कता अपनाइएको छ ।
दुबै मृगौला दान ! यता पनि ध्यान दिने कि ! (भिडियो)
काठमाडौं, साउन ३२ । स्वच्छ तथा स्वस्थकर आहारको कमी, व्यस्त जीवनशैली लगायतका विभिन्न कारणले नेपालमा मृगौला रोगीको संख्या बढ्दो छ ।
‘स्क्रब टाइफस’बाट तीनको मृत्यु, ७६ जनामा संक्रमण, कसरी लाग्छ रोग, लक्षण के–के ?
चितवन, साउन ३१ । गत वर्षदेखि नेपालमा आधिकारिकरुपमा पुष्टि भएको नयाँ रोग ‘स्क्रब टाइफस’बाट सोमबारसम्म तीनजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । चितवनसहित भोजपुर र संखुवासभाका गरी तीनजना बिरामीको मृत्यु भएको हो ।
भोजपुरमा १४० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त
भोजपुर, साउन ३१ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरमा जनस्वास्थ्य अधिकृत र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित १४० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
इलामबासीका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थालनी हुँदै
झापा, साउन ३० । सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत झापाको बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी टिचिङ अस्पतालले भदौ १ गतेदेखि सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।
अब दाँतको उपचार गाउँगाउँमा
रसुवा, साउन ३० । दाँतको उपचार पाउन नसकेका रसुवावासीलाई अब नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा प्रदान हुने भएको छ ।
धनुषटङ्कारबाट पीडित ३४ दिने शिशुको सफल उपचार, यसकारण भयो धनुषटङ्कार
दाङ, साउन २८ । दाङमा धनुषटङ्कारबाट पीडित एक बालकको सफल उपचार गरिएको छ । तुलसीपुरस्थित तुल्सी अस्पतालले ३४ दिने शिशुको सफल उपचार गरेको हो ।
दुवाकोटमा यस्तो बन्दैछ अत्याधुनिक वीर अस्पताल, ६ वर्षमा ‘तयार’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं, साउन २६ । आजभन्दा १ सय २७ वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शम्शेरले स्थापना गरेको नेपालकै पुरानो र ठूलो अस्पताल वीर अस्पतालको अब स्वरुप परिवर्तन हुने भएको छ । पुरानो र राम्रो अस्पतालकोरुपमा चिनिएको वीर अस्पताल हिजोआज भने अव्यवस्थित अस्पतालकोरुपमा चिनिन थालेछ ।
भोला रिजालसहितको चिकित्सकको टोली सप्तरी जाँदै
काठमाडौं, साउन २६ । बाढी–पहिरोबाट पीडित जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि वरिष्ठ चिकित्सकको टोली सप्तरी जिल्ला जाने भएको छ । लामो समयदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सप्तरीबासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि डा. भोला रिजाल नेतृत्वको विशेषज्ञ टोली आगामी शुक्रबार सप्तरी जाने तयारी गरेको हो ।